श्रममन्त्रीले यसरी बन्द गराए मलेसिया जाँदा कामदार लुट्ने धन्दा, सिण्डिकेटधारी आन्दोलित (भिडियो)::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
शुक्र, फाल्गुन ९, २०७६
श्रममन्त्रीले यसरी बन्द गराए मलेसिया जाँदा कामदार लुट्ने धन्दा, सिण्डिकेटधारी आन्दोलित (भिडियो)
शनि, जेष्ठ ५, २०७५
केहि समय अघि देखि नै नेपाल सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय लागू गरेको हो । तर त्यो निर्णय हालसम्म पनि व्यवहारिक रुपमा नै असफल देखियो । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मन्त्री स्तरीय निर्णयमा २०७२ असार २१ बाट ६ खाडी मुलुक सहित मलेसियाको लागि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रीको सो निर्णयसंगै म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्क वापत १० हजार लिन पाउने निर्णय गरेका थिए । तर यस विचमा सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने दायित्व सरकारको भएपनि लागू गराउन तर्फ न त सरकारले ध्यान दियो, न त म्यानपावर व्यवसायीले सो कुरा व्यवहारत कार्यन्वयन नै गरे । फस्वरुप फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नाममा हरेक प्रकारका सिण्डिकेट खडा गरी विभिन्न नाममा लुट धन्दा नै मच्चियो ।
त्यसवीचमा मन्त्रालयमा यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइएको पनि हो । तर श्रम, पराराष्ट्र मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिण्डकेटधारी कम्पनीमथी छानविन ग¥यो तर त्यो केवल देखावटी मात्र भयो । त्यसले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । र बैदेशिक रोजगारीमा जाने नाममा गरिब नेपाली युवा ठगिने क्रम निरन्तर चलि नै रह्यो ।
निर्वाचनपछि मुलुकमा स्थायी सरकार बन्यो । र यसबारेमा बारम्बार छलफलहरु हुन थाले । श्रम तथा रोजगार मन्त्री हुने वित्तिकै गोकर्ण विष्टले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट हटाइ छाड्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरे । तर स्वास्थ्य सिण्डिकेट हटाउन निकै सकस थियो ।
यो वीचको ठूलो सकसपछि विभिन्न राजनीतिक शक्तिको आडमा चलिरहको सिण्डिकेट हटाउने विषयमा सरकार केही अगाडी बढ्यो । विहिबार श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बैदेशिक रोजगारीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहको सिण्डिकेट खारेज भएको घोषणा गरेका छन् ।
रकारले यसको कदम अगाडी बढाएको छ । परिणाम स्वरुप वायोमेट्रिक मेडिकल, माइग्राम्स, वन स्टप सेन्टर, भीएलएन नेपाल, आइएससी जिएसजी नामक संस्था खारेज हुने भएका छन् । सरकारको यो कदम भन्दा पनि कार्यान्वायनको पक्षचाहीँ महत्वपूर्ण छ । किनकी सिण्डिकेटधारी कम्पनीहरु बन्द नभएसम्म विश्वास गरीहाल्नुपर्ने अबस्था छैन । सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपनि अन्य स्वाथ्य परिक्षणका संस्थाहरु बन्द भएका भने छैनन् ।
र तीनीहरु सजिलै बन्द हुने अबस्थामा पनि छैनन् । त्यसैले सरकारले तत्काल कडा कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै सरकारले सिसण्डकेटधारी कम्पनी खारेज गर्ने बताएपनि मलेसियन दूतावासका केही कर्मचारी भने यी सबै प्रक्रियाहरु पुरा गर्नैपर्ने बताइरहेका छन् ।
बैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया कामदाहरुको ढाड सेकेर रकम लिने निर्णय अरुलाई पन्छाउँने भन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा मन्त्री विष्ट अगाडि बढ्न जरुरी छ भने साउदी अवर जाँदा गाम्का नेपाल लगायत सबै सिण्डिकेटलाई खारेज गरिनुपर्छ ।
सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको बताएको केही दिनमै प्रधानमन्त्रीले गुमाए एक मन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीकै कमिसन एजेन्ट पो रहेछन गोकुल बाँस्कोटा ! रविले लाइभमै भन्ने कारणसहित (भिडियो)
ऋण नतिरेपछि भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर लिलामीमा
रामपुरमा फेला परेको अनौठो गुफा ओझेलमा !
गर्भवतीलाई हातमा अण्डा, घरमा हरियो झण्डा
यी हुन् नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेका शक्तिशाली हतियार(भिडियो सहित)
अव विश्वविद्यालयको डिग्री घरै बसेर
चर्चबाट फैलियो दक्षिण कोरियामा कोरोना, २५ लाख मानिसलाई घरभित्रै बस्न आग्रह
मनिषा, महजोडी सहित दस जनालाई नइ पुरस्कार दिने घोषणा
२ लाख घुससहित सुर्खेतबाट खानेपानीका प्राविधिक पक्राउ
आफुप्रति उठेका औलाको प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिउन
आफैंले आफैंलाई सिध्याउने रहेछन् : दाहाल
अ`वैध सम्बन्ध राखेको आशंकामा पतिले गु`प्ता`ङ्गमा सुपरग्लु लगाए, पत्नीको अवस्था ग`म्भीर
महायज्ञमा डेढ करोड सङ्कलन